सेरोफेरो : सुइऽऽऽयँ झ्याप्प !
सुइऽऽऽयँ झ्याप्प !
सुइऽऽऽयँ झ्याप्प । नमस्ते म साइकल । तिमी हिड्ने खुट्टा म गुड्ने पांग्रा । तराइको सम्मबाटोमा पनि कुद्दिन्छु । डाँडैडाँडा पनि हिड्दिन्छु । साँगुरो बाटोमा पनि छिर्छु । सम्म र ओरालोमा म तिमीलाई बोक्छु । ठाडो पहाड तिर चढ्न खोज्यौं भने तिमीले मलाई बोक्नु पर्छ । तिमीले मेरो पेडलमा बल लगाएनौ भने म हिड्दिन क्यारे । ओहो हतार पो भयो बाइबाइ गएँ है !
ल साइकल त गयो । उसले भन्नै भुल्यो कि हामीले रिक्सा चलाउन पनि आफ्नै बल लगाउनु पर्छ । गाडा तान्न पनि आफैं नै तम्सनु पर्छ । सामान बोक्ने गाडा क्या बयल गाडा होइन नी । बयल गाडालाई त गोरु राँगोले तान्छ । तराइमा देखेका हौंला नि तिमीले बयल गाडाले त गाडाले भन्दा पनि धेरै गह्रौं भारी बोक्छ ।
हुन त मान्छे पनि त भारी जस्तै गह्रौं हुन्छ नी । जिउ कति भारी हुन्छ है मान्छेको पनि मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने साधन पनि हुन्छन नी जनावरले तान्ने खालका ।
खच्चड गधाले तान्ने साधन देखेका छौं दुई पांग्रे क्या त तराइ तिर देखिने । हो टाँगा बल्ल चिन्यौं भारी त चौंरी भेडा गधा खच्चडले पनि बोक्छन् । अब भने तिमीले बुझे जस्तो छ । म दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगको कुरा गर्दैछु । त्यहाँ गाडी सररर गुड्ने राम्रा सडक पुगेका छैनन् । साँघुरो उकालो ओरालो बाटोमा जनावरले नै सामान बोकेर लैजान्छन् । के गर्नु तिमी हामीले ठूलो भारी टाढा सम्म बोक्न गाह्रो हुन्छ नी त ।
झण्डै भुलेको साना जहाज हेलिकप्टर पनि त पुग्छन् नी हिमाली भेगमा । मान्छे र सामान तिनले पनि बोक्छन् । हिउँनै हिउँ हुने ठाउँमा त स्नो मोबाइल स्नो मेसीन र स्लेड पुल पनि कुद्छन् । स्लेड पुललाई त कुकुरले तान्छ । यसको चलन विकसीत देशमा बढी देखिन्छ ।
पहाडी भेगमा झै हिमाल तिर ठूला बस टेम्पो ट्याक्सी पुर् याउन गाह्रो छ । शहरमा गुड्ने ट्रक जीप डम्फरलाइ पनि दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा पुग्न गाह्रो पर्छ । अँ तिमीले याद गरेका छौं बाटो खन्ने क्रममा डोजर चाहिँ जान्छ नी त्यता तिर । कस्तो भिरै भिरमा पुग्छ है त्यो त पक्की सडक सुविधा नभएका र यी यातायातका साधन नबनाएका भए हामीलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो होला है अहिले त पानी भित्र पनि पनडुब्बी जहाज चल्छ । पानी माथि डुंगा पानी जहाज तैरन्छन् । जमिनमा टेम्पु मोटरसाइकल तथा जनावरले मान्छे तथा अन्य भारी ओसार्छन् । हावामा बतास्सिने प्यारासुट रकेट जस्ता साधन पनि बनेका छन् । अझ बालुवामा पनि कुद्ने साधन बनाइएका छन् ।
सुइऽऽऽयँ झ्याप्प ! नमस्ते छलफल सकियो म फेरि आएँ नी ! मलाई कुदाउन त पेडलमा बल लगाउने बस कुदाउन चाहिँ कहाँ बल लगाउँछन् त त्यसको पनि पेडल हुन्छ की सोच्दै गर है अब त म फर्केर आउँदिन् । बाइबाइ !
लौं फर्केर आको साइकल त गइ हाल्यो । अचम्मैको कुरा पो गर् यो त यसले । हुन पनि हो बसको पेडल देखेका छौं तिमीले छैनौ ए अनि कसरी कुद्छत बस् मोटरसाइकन नी अँ ठिक भन्यौं डिजेल पेट्रोल बिजुली सोलार आदिबाट चल्छन नी । तर जनावरहरुलाई भने अन्न खुवाउनु पर्छ नी हैन त खच्चडको पनि साइकलका झै पेडल हुने भए कस्तो हुन्थ्यो होला हाँसो उठ्दो कुरो है !
सुइऽऽऽयँ झ्याप्प । हा हाऽऽऽ फेरि साइकल आयो भनेर झुक्किएको त हैन नि । ऐले त मैले जिस्काएको पो त । अब तिमीले नै सोच्ने पालो आयो क्या । यि सबै साधनहरु नभएको भए हामीलाई के के अफ्ठ्यारो पथ्र्यो होला सोच्दै गर ल !
यातायातका साधन र तीनका उधाहरण
जनावर आफै : गधा खच्चड घोडा भेडा हात्ती उँट ।
मान्छे आफै : भरिया
जनावरले तान्ने : बयलगाडा गाडा टाँगा
मान्छेले तान्ने : साइकल ठेला रिक्सा ह्वीलचियर
हावामा चल्ने : प्यारासुट हवाइजहाज रकेट
पानीमा चल्ने : जहाज पानी जहाज डुंगा
रेलरोड बनाएर चल्ने : ट्रेन केबलकार
इन्धनले कुद्ने : मोटरसाइकल बस ट्रक
मेसिनले लैजाने : इलेक्ट्रीक भर् याङ लिफ्ट बक्स
(नागरिक जूनकीरीमा प्रकाशित)